သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာရန် အဆင့် ၅ဆင့်
Forex ရှိ အရောင်းအဝယ်တစ်ခုလုံးသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး၊ အချိန်အတော်ယူပါသည်
နည်းပညာပိုင်းအရ၊ အရောင်းအဝယ်သည် အတော်ရိုးရှင်းသည်၊ အရှင်းဆုံးပြောရရင်၊ စိတ်ကူးတစ်ခုလုံးသည် ဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်ရပြီး၊ ဈေးတင်ကာ ရောင်းရရန်ဖြစ်သည် - သို့သော် ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာများ ရှိပါသေးသည်။ ထိုအရာများသည် လူသစ်များကြောက်တတ်သည့် ဆင်ခြေများဖြစ်တတ်သည်။
ယနေ့အခါ၊ အရောင်းအဝယ်သည် “Wolf of Wall street” ဇာတ်ကားထဲကနဲ့ မတူတော့ပါဘူး။ တကယ်တော့၊ စိတ်ရှည်သည်းခံမှု နည်းနည်းထားရုံနှင့် လူတိုင်းကျွမ်းကျင်နိုင်သည့် နားလည်လွယ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ရောင်းဝယ်သူအများစုသည် MetaTraderတွင် ၎င်းအလုပ်လုပ်ပုံကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် နှစ်နာရီ (သို့) သုံးနာရီလိုအပ်သည်။ အခြေခံ အရောင်းအဝယ်ပစ္စည်းများနှင့် ဈေးကွက်ကိုယ်တိုင်ကို လေ့လာခြင်းအတွက် အချိန်နည်းနည်းထပ်ထည့်ပါ - သင်စလို့ကောင်းပါပြီ။
FBSတွင် အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်ခဲ့]ပြီးနောက်၊ MetaTraderတွင် သင့်ပထမအော်ဒါကို ဖွင့်ရန်အချိန်ကျပါပြီ။ ကြားခံဆက်သွယ်ပေးသောစနစ် တစ်ခုလုံးသည် အတော်လေးနားလည်ရလွယ်သည် - အထူးသဖြင့် သင့်တွင် လမ်းညွှန်ရှိပါက။
ကျွန်တော်သည် ဒီမိုအကောင့်တွင် အဆင်ပြေနေပေမယ့် တကယ်ငွေထည့်ပြီး လုပ်ရမှာကို ကြောက်နေပါသည်
ဒီမိုအကောင့်များသည် ပထမခြေလှမ်းစတင်ရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဤအကောင့်သည် တကယ်မဟုတ်ကြောင်း သင်အမှတ်ရသင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ဒီမိုထည့်သွင်းငွေအတွက် တာဝန်နည်းသည်၊ သင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ ထိန်းချုပ်မှုနည်းသည်ဟု ခံစားရပါမည် - ခြုံကြည့်သော် လေ့ကျင့်ရေးအခြေအနေများတွင် သင်လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဈေးကွက်ကို တကယ်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် တကယ်လေ့လာခြင်းသည် တကယ့်အရောင်းအဝယ်တွင် တည်နေသည်။ တကယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သင်လုပ်ဆောင်ပြီး၊ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဈေးကွက်အပြောင်းအလဲကို ရှာဖွေမှသာလျှင်၊ အရောင်းအဝယ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ အညွှန်းကိန်းတွေကို ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ရမလဲ၊ အောင်မြင်အောင် ဘယ်အချိန်မှာ လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ သေချာသဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါသည်။ အမှားများကို ရှောင်လို့မရပါ - ဒါပေမယ့် ပင်ကိုယ်သိနှင့် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်၊ သင်ပိုင်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ ပါးနပ်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
FBSတွင် ကျွန်တော်တို့ ရောင်းဝယ်သူအသစ်များအား အလွန်အသုံးဝင်ပြီး လူကြိုက်များသော ကြိုဆိုသည့် အပိုဆု $၅၀တို့ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ဈေးကွက်၊ MetaTrader၊ သင့်အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီတို့နှင့် အကျွမ်းဝင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်: သင့်အခမဲ့ $၅၀ရယူပြီး၊ ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မပါဘဲစတင်ရောင်းဝယ်ပါ။ သင့်မှာဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိ - အောင်မြင်စရာတော့ အများကြီးပါ။
လူတိုင်းအတွက် သင့်လျော်သည့်ဘုံအစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ သင့်အတွက် အဆင်ပြေဆုံးဗျူဟာ၊ သင့်ရည်မှန်းချက်နှင့် ချဉ်းကပ်နည်းက ဘာလဲဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ရန်၊ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်ယာရီစတင်ပါ။ သင်တစ်ခုဖွင့်လိုက်တာနဲ့၊ ဘာလို့လဲ၊ ဘယ်ချိန်မှာပိတ်ခဲ့တာလဲ၊ မှန်ကန်တဲ့ရွေ့လျှားမှုကို ဖော်ထုတ်ရန် ဘယ်အညွှန်းကိန်းကို အသုံးပြုခဲ့လဲဆိုတာ၊ အော်ဒါအားလုံးကို အဲ့မှာထည့်ထားပါ။ အောင်မြင်သော၊ မအောင်မြင်သော အရောင်းအဝယ်များကိုမှတ်သားပြီး၊ ထို့နောက်ပြန်သုံးသပ်ပါ: ဒါဟာ သင့်ဗျူဟာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ ၎င်းအတွက် တိုးတက်မှုလိုအပ်သလားဆိုတာ သင့်ကိုနားလည်စေမှာဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်မှာ အဲ့လောက်ငွေအများကြီးမရှိပါဘူး၊ ကျွန်တော်ဝင်ငွေအများကြီး မရနိုင်ဘူးဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဇွတ်တွန်းဖို့တောင် တန်ရဲ့လား?
Forex အရောင်းအဝယ်တွင် ၎င်း၏ တောက်ပသောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်: မည်သည့် ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်မဆို စနိုင်ပြီး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသေးစားတွေမှာလည်း အကျိုးကျေးဇူးများရှိပါသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် အတွေ့အကြုံရစေပြီး၊ အရှုံးများကိုတောင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခုခံမှု ဖွံ့ဖြိုးလာစေသည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အမြတ်အစွန်းပေါင်းလဒ်များက ဘယ်လိုလဲ - သင့်တော်သော leverageနှင့် အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ ဈေးကွက်တွင် အမြင့်ဆုံး leverage - ၁:၃၀၀၀နှင့် FBSမှာ ကျွန်တော်တို့ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သင့်ကနဦးစရံငွေထက် ပိုကြီးသော အော်ဒါပေါင်း ၃၀၀၀ဖွင့်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုနည်းသော ငွေပမာဏနှင့်လည်း စတင်ပေမယ့်၊ ဈေးကွက်တွင် အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးသည်။
FBSတွင် သင့်အတွက် သင့်တော်သော အကောင့်အမျိုးအစား၊ သင်လိုအပ်တာနှင့် ကိုက်ညီမည့်တစ်ခုကို ရွေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ ၅ခုကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ၊ သင်ရမည့် အကျိုးအမြတ်၏ စွမ်းအားအပြည့်အဝ သုံးလိုက်ပါ။
ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ အကြိမ်ကြိမ် ကျရှုံးခဲ့တယ်။ ဒါဟာ "ကျွန်တော်နဲ့မကိုက်"ဘူးထင်တယ်
Forex၏ အဓိက ဥပဒေသမှာ "မလုပ်ခင် အရင်စဉ်းစား"ဖြစ်သည်။ Forexလေ့လာမှုထဲ ရောက်သည်နှင့် ဗျူဟာများ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲနှင့် အညွှန်းကိန်းများအား အပြင်လောကရှိ အရာအတော်များများ ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးထားသလဲဆိုတာ သင်စိတ်ဝင်စားလာပါလိမ့်မည် - ဈေးကွက်၏ ယုတ္တိတန်သောကွင်းဆက်သည် တကယ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။
သို့သော် သတိထားပါ: တစ်ခါတစ်ရံ ရောင်းဝယ်သူများသည် အချက်အလက်နှင့် မိန်းမောတွေဝေတတ်ကြသည်၊ သူတို့သည် အဓိကအချက် - အော်ဒါ အဖွင့်နှင့် အပိတ်အတွက် တိကျမှန်ကန်သည့် ကာလကို ရှာဖွေခြင်းကို နောက်ကြကျသည်။ သင်လေ့လာထားသမျှ ဗျူဟာအားလုံးကို မသုံးပါနဲ့: ၎င်းကိုနားလည်ရန် တစ်ခုရွေးပြီး၊ ၎င်းပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်ပါ၊ ထို့နောက် လိုအပ်ပါက ရှေ့ဆက်ပါ။
. သင့်အရည်အချင်းကို သွေးပြီး၊ သင့်အသိပညာကို စနစ်တကျဖြစ်ပါစေ: FBSမှ ဈေးကွက်တွင် ဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမလဲ လေ့လာရာတွင် ရောင်းဝယ်သူများအား ကူညီရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် များစွာသော အရောင်းအဝယ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ ကျင်းပပါသည်။ သင့်မြို့တွင် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ရှာပါ။
. Forexအား အိမ်မှလေ့လာရန် ပိုအားသန်ပါက၊ ကျွန်တေ်ာတို့ အွန်လိုင်းသင်တန်းများမှ ကြိုဆိုပါသည်: ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်သူများမှ ပြုလုပ်သည့် FBS အင်တာနက်သင်တန်းများမှာ ပါဝင်ပြီး၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများမှ သီအိုရီနှင့် လေ့ကျင့်ရေးစွမ်းရည်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကို အားပေးပါ။ [နောက်ထပ် အင်တာနက်မှသင်တန်း ဘယ်အချိန်လဲဆိုတာ ကြည့်ပါ
. အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်း အမှတ်ရပါ - ၎င်းသည် ရောင်းဝယ်သူများအား ၃၀%သာ အောင်မြင်ခဲ့ရင်တောင်မှ အမြတ်ရစေပါသည်။ Stop Lossမရှိဘဲ သင့်အရောင်းအဝယ်သည် တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ အရှိန်နှင့်ဆင်းသွားသည့် ရထားတစ်စင်းလိုပါပဲ။ အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းသိရန် လိုအပ်သမျှ ဒီမှာ ဖတ်ပါ - ကျွန်တော်တို့ သုံးသပ်သူများထံမှ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗီဒီယိုများထဲမှ တစ်ခုကိုလည်း တစ်ချက်ကြည့်ပါ။
ကောင်းပြီ၊ နားလည်ပြီ၊ ကျွန်တော် Forexမှာ ငွေရှာချင်ပါတယ်! ဒါပေမယ့် အရမ်းမစွန့်စားချင်ဘူး...
Forex အရောင်းအဝယ်နှင့်ဆို ထည့်စဉ်းစားစရာအများကြီး ရှိပြီး၊ ကိစ္စတော်တော်များများကို ကြိုမှန်းနိုင်ပေမယ့်၊ မမျှော်လင့်သော အလှည့်အပြောင်း (သို့) ရိုးရှင်းတဲ့အမှားအတွက် နေရာရှိနေပါသေးသည်။
အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စိတ်ခံစားချက်ထိန်းချုပ်မှုသည် သင့်အရောင်းအဝယ်ကဏ္ဍများ စီစဉ်ပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အခါ ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်စိတ်ကို ထိန်းရာတွင် အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ထိုမတိုင်ခင်တော့၊ သင်ရောင်းဝယ်ချင်သည့် ငွေကြေးကို ဆုံးဖြတ်ရန်လိုပါသည်။ ငွေကြေးအတွဲသည် ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်အပါအဝင်၊ အတော်များများကို လွှမ်းမိုးပါသည်။
ချောမွေ့စွာစတင်ချင်ပါက၊ အန္တရာယ်အနည်းဆုံး အတွဲများနှင့် စတင်ရန် ပိုနှစ်သက်ပါမည်: USD ပါသည့် အဓိကအတွဲများအပြင်၊ JPYပါသည့်အတွဲများသည်လည်း ပိုတည်ငြိမ်နိုင်ပါသည်။ ရေနံဈေးကွက်နဲ့ ဝေးဝေးရှောင်နေပါ - အနည်းဆုံး ခုတော့၊ ဒီအရာကိုလည်း အောင်မြင်နိုင်မည့် ကာလရှိလာပါတော့မည်!
ဘော့စ်တစ်ဦးလို ငွေရယူပါ - ဘော့စ်တစ်ဦးဖြစ်ပါစေ!
Forex အရောင်းအဝယ်သည် ရောင်းဝယ်သူမှ လှည့်စားရန်လိုအပ်သည့် ဆန်းကြယ်သည့်နဂါးမဟုတ်ပါ။ Forex အရောင်းအဝယ်သည် အပိုင်းမြောက်များစွာပါရှိသည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ၎င်းတို့အားလုံးဟာ အချိန်အနည်းငယ်၊ သည်းခံစိတ်နှင့် လှုံ့ဆော်မှုအများကြီးတို့ဖြင့် ရိပ်စားမိပြီး၊ ကျွမ်းကျင်ရန် လုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
ဤငါးဆင့်သည် ရောင်းဝယ်သူတိုင်း၊ ကြီးမြတ်သောသူများအတွက်တောင်မှ ဘုံနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး - သူတို့နောက်မဆုတ်သည့်အတွက် တော်လာကြသည်။ သင့်ပန်းတိုင်တွင် အာရုံစိုက်ပါ၊ အသိပညာနှင့် စွမ်းရည်ကို သုံးပြီး၊ Forex ဖွင့်ပေးထားသမျှ ကျယ်ပြန်သော့ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို စူးစမ်းပြီး၊ တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါသည်။ အမှတ်ရပါ: လူအတော်များများသည် အရောင်းအဝယ်ကို စီမံခန့်ခွဲကြသည် - ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်!